आईसीएफसी वित्तीय संस्था लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home लगानी आईसीएफसी वित्तीय संस्था लिमिटेड
आईसीएफसी वित्तीय संस्था लिमिटेड
वर्गीकरण: वित्त कम्पनी
मुख्य कार्यालय: भाटभटेनी, काठमाडौं
स्थापना : विसं २०६१ असार ३०
सीईओ तथा अध्यक्ष : रामबाबु पन्त
शाखा कार्यालयहरू : ८
संस्थापक : ६७.५ प्रतिशत
सर्वसाधारण : ३२.५ प्रतिशत
आईसीएफसी वित्तीय संस्थाले विसं २०६१ साल असार ३१ गतेदेखि आफ्नो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस कम्पनीले २०६३ फागुनमा रू.२४ लाख ३५ हजार ४ सयका साधारण शेयर प्राथमिक बजारबाट सर्वसाधारणलाई विक्री गरेको थियो । त्यसको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको काम एनएमबी बैङ्क लिमिटेडले गरेको थियो । हाल यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार कार्य एलिट क्यापिटल लिमिटेडले गरिरहेको छ । गत कात्तिक १४ गते सम्पन्न कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारणसभाको निर्णय अनुसार आव ०६६/६७ का लागि शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिरहेको छ । आव ०६५/६६ मा यो कम्पनीले १० प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
प्राविधिक विश्लेषण :
यस कम्पनीको १ सय ८० दिनको शेयरमूल्य ट्रेण्डलाई प्राविधिक विश्लेषणको औजार आरएसआईद्वारा विश्लेषण गर्दा आरएसआई रेखा अहिले न्यूट्रल जोनको स्केल ३५ मा रहेको देखिन्छ । केही समयअगाडि स्केल २५ को हाराहारीबाट सामान्य टेवा पाएर स्केल ४२ सम्म पुगेको आरएसआई रेखा पुन: ओरालो लागेर हाल स्केल ३२ मा देखिएको छ । यसले आरएसआई रेखा पुन: ओभरसोल्ड जोनतिर जाने सम्भावना बढेको देखिन्छ । यस कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले ओभरसोल्ड बुलिश रिभर्सल प्याट्रनको प्रतीक्षा गर्नु उत्तम देखिन्छ भने विक्रीकर्ताहरूले केही समय होल्ड गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।
वित्तीय विश्लेषण :
चालू आव ०६७/६८ को अपरिष्कृत प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यो कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ३२ करोड ९३ लाख रहेको छ । साथै यस आवको प्रथम त्रैमाससम्ममा यो कम्पनीले रू. १ करोड १४ लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा चुक्ता पूँजी नबढे पनि खुद मुनाफा उल्लेख्य मात्रमा बढ्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ । आगामी त्रैमासमा पनि कम्पनीको नाफा यही अनुपातमा वृद्धि हुने हो भने चालू आवमा यो कम्पनीका शेयरधनीहरूले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको जगेडा कोष अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ४७ दशमलव ५५ प्रतिशत वृद्धि भएर अहिले रू.५ करोड २० लाख पुगेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको निक्षेप पनि २७ दशमलव १७ प्रतिशत बढेर रू. २ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।
त्यसैगरी, कम्पनीको लगानी ३ सय २९ प्रतिशतको उच्च दरमा वृद्धि भएर अहिले रू. २३ करोड २७ लाख पुगेको छ । यसरी कम्पनीको लगानी विविधीकरणसहित उच्च दरमा बढेकाले आगामी वर्षहरूमा यसको मुनाफामा पनि सोहीअनुरूप वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । सोही अवधिमा कम्पनीको ऋण तथा सापटी पनि १३ प्रतिशतले बढेर रू. २ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ ।
वित्तीय परिसूचक :
यस कम्पनीका वित्तीय परिसूचकहरूमा क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको देखिन्छ । वार्षिक खुद मुनाफासहित प्रतिशेयर आय पनि बढिरहेको छ भने पीई र पीबी अनुपात पनि स्वाभाविक नै देखिएका छन् । अघिल्लो वर्ष रू.१४ रहेको प्रतिशेयर आम्दानी अहिले रू. १९ पुगेको छ । त्यसैगरी, मूल्य- आम्दानी अनुपात पनि अघिल्लो वर्षो २५ बाट घटेर अहिले १४ कायम भएको छ । कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई दिँदै आएको प्रतिफलमा पनि विस्तारै वृद्धि गरी रहेको साथै समग्र वित्तीय परिसूचक सामान्य गतिमा सुधार गरेको देखीन्छ ।
वार्षिक शेयर कारोबार विश्लेषण :
यस कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा औसत रूपमा कारोबार हुने गरेकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्नका लागि समस्या नपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेर आफूलाई चाहिएको समयमा विक्री गर्न नपाइएला भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन । साथै शेयर मूल्यमा उत्तारचढाव भइरहने हुनाले सट्टेवाजहरूले यस बैङ्कको शेयरमा लगानी गरी मुनाफा कमाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
५२ दिनको कारोबारअनुसार यस कम्पनीको सबैभन्दा उच्च शेयरमूल्य रू.३ सय ८४ र सवैभन्दा न्यून मूल्य रू.२ सय १६ कायम भएको देखिन्छ । मङसिर २८ को कारोबारमा यस कम्पनीको शेयर मूल्य रू. १ ले घटेको छ । हाल यस कम्पनीको स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ३ दशमलव ०७ छ । यसले समकालीन वित्त कम्पनीहरूको तुलनामा यसको शेयरमा सामान्य जोखिम रहेको देखाउँछ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार यस कम्पनीको प्रतिशेयर आय रू.२४ दशमलव ०२ तथा मूल्य-आम्दानी अनुपात ९ दशमलव ४५ गुणा रहेको छ । जसअनुसार यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गरी रू. १ आम्दानी गर्नका लागि रू. ९ दशमलव ४५ मूल्य तिर्न लगानीकर्ता तत्पर रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको किताबी मूल्य रू.१ सय १२ दशमलव ३३ तथा मूल्य-किताबी मूल्य अनुपात २ दशमलव ०२ रहेको छ ।
शम्भु काफ्ले ज्याम् टेक्नोलोजिज प्रालि